सामाजिक सञ्जालमा गरिने पोस्ट निशुल्क बुस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ जानुहोस
Homeसामाजिक सञ्जालमा गरिने पोस्ट निशुल्क बुस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ जानुहोस
mskhanal 8:58 PM
के हो इम्पायार क्रेड, एउटा खेल हो । जसले सामाजिक सञ्जालमा हुने पोस्टहरुलाइ बुस्ट गर्न सहयोग गर्न सक्छ
यसको प्रयोगकर्ता कसरी बन्ने?
ट्विटर ,फेसबुकको खातालाइ सिधै कनेक्ट गर्न सकिन्छ अथवा इमेलको प्रयोग गरेर पनि खाता खोल्न सकिन्छ
यसमा साथी बनाउने प्रक्रिया कस्तो छ?
अरु सामाजिक सञ्जाल भन्दा यसमा साथी बनाउन गार्हो छ । यसमा प्रत्येक प्रयोगकर्ता जसलाइ टिकर भनिन्छ, उसको निश्चित मुल्य हुन्छ, त्यो मुल्य तिरेर शेयर किन्न सकिन्छ
किन्नको लागी पैसा कहाँबाट ल्याउने?
यसमा हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने पैसा होइन, यहि खेलको लागी एभ्स नामको मुद्रा प्रयोग हुन्छ। यो कमाउनको लागी, अरुले दिएको मिसन पुरा गर्न सकिन्छ। आफ्नो शेयर बेचेर पनि एभ्स पाइन्छ तर यो अरुको हातमा हुन्छ, त्यसैले मिसन पुरा गर्नु नै सजिलो उपाय हुन्छ
मिसन भनेको के हो?
एम्पायर क्रेडको सबैभन्दा महत्वपुर्ण बिशेषता नै मिसन हो । यसमा प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो युट्युब, ट्विटर, फेसबुक, ब्लगका पोस्टहरु हेर्न केहि एभ्स दिने गर्दछन । कतिपयले आफ्नै शेयर किन्न वा गिफ्ट समेतको रुपमा मिसन बनाएका हुन्छन । यसरी मिसन मार्फत अपरिचितहरुसँग समेत आफ्नो पोस्ट पुर्याउन सकिन्छ, जुन पोस्ट बुस्ट गर्नु भन्दा सस्तो पर्न जान्छ
के मैले मिसन बनाउन सक्छू
सेयर बिक्रीमार्फत वा मिसन मार्फत पर्याप्त एभ्स प्राप्त गरेपछी आफैले पनि मिसन बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा सजिलै पेज बुस्ट हुन्छ । यदि तपाईँ पनि इम्पायर क्रेड चलाउन चाहानुहुन्छ भने यो लिंकमा जानुहोला https://www.empire.kred/MSKHANAL?t=mbp0tzox